Home News Dowladda oo u ku fashil-tay Wax ka qabashadda Amnigga Caasimadda iyo Dilalka...
Dowladda oo u ku fashil-tay Wax ka qabashadda Amnigga Caasimadda iyo Dilalka oo Tira-beelay!!!
-Waxaa saacadihii la soo dhaafay dilal qorsheysan ay siyaabo kala duwan uga dhaceen gudaha magaalada Muqdisho.
Dilka koobaad ayaa ka dhacay degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir, iyadoona loo geystay Nabadoon lagu magacaabi jiray Xuseen Geedi Jimcaale.
Kooxo ku hubeysanaa Bastoolado ayaa la sheegay in Marxuumka ay ku toogteen ilinka hore ee gurigiisa oo ku yaalla degmadaasi.
Dhinaca kale askari ka tirsan Ciidamada dowladda, gaar ahaan kuwa Minashiibiyada ayaa duhurnimadii maanta qof shacab ahaa ku dilay degmada Xamarweyne ee G/ Banaadir.
Marxuumka la dilay ayaa ahaa darwal Mooto Bajaajle ah, waxaana dilkiisu uu ka dhacay nawaaxiga Suuqa Bacadlaha ee degmada Xamarweyne.
Askarigii ka dambeeyay dilkaasi ayaa lagu soo warramayaa in Ciidamada ammaanku ay gacanta ku dhigeen.
Welina ma jiro war hadal oo ka soo baxay maamulka degmadaasi oo la xariira dilka Marxuumkaasi.
Maalin ka hor ayey aheyd markii askari ka tirsan Ciidamada Minashiibiyada uu darwal Mooto Bajaajle ahaa ku dilay gudaha degmada Waabari ee gobolka Banaadir.